Olee otú mmekọrịta iPad ka New Computer
> Resource> iPad> Olee ka mmekọrịta iPad ka New Computer
M reworo ochie na kọmputa na zụtara ọhụrụ. M chọrọ ka mmekọrịta iPad 2 na iTunes na ọhụrụ na kọmputa. Olee otú m pụrụ imezu nke a?
Bu n'obi na-mmekọrịta gị iPad na iTunes on a ọhụrụ kọmputa? I nwere ike inwe a dee, na-agwa ị ga-atụfu data na gị iPad. Gịnị ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka mmekọrịta iPad ka a ọhụrụ kọmputa na-enweghị ida? Ịdị nwayọọ. Ebe a bụ ezi ihe ngwọta. Wondershare TunesGo (n'ihi na Windows ọrụ) na-enye gị ike ka mmekọrịta music, fim, listi ọkpụkpọ, iTunes U, pọdkastị, audiobooks, TV na-egosi ọhụrụ iTunes na-enweghị ihe furu efu, na ndị ọzọ data, dị ka photos, kọntaktị na SMS ndị ọhụrụ na kọmputa.
Cheta na: The Mac version - Wondershare TunesGo (Mac) na-ahapụ gị mmekọrịta music na listi ọkpụkpọ ọhụrụ iTunes na nkwado ndabere music, photos, fim, pọdkastị, iTunes U, music videos, audiobook, olu meno-egosi na TV ndị ọhụrụ na kọmputa.
Olee otú mmekọrịta iPad ọhụrụ kọmputa
Ma nsụgharị na-arụ ọrụ a yiri nke ahụ. Dị nnọọ ibudata ma wụnye nri mbipute a usoro. Ebe a, ayak 'ina malitere na-windows version.
Nzọụkwụ 1. Jiri eriri USB jikọọ gị iPad na ọhụrụ kọmputa
Na-agba ọsọ Wondershare TunesGo na ọhụrụ na kọmputa. Jikọọ gị iPad ọhụrụ na kọmputa site na iji eriri USB na-abịa na gị iPad. Mgbe ahụ, bụ isi window Pop elu dị ka screenshot-egosi n'okpuru.
Cheta na: ma nsụgharị na-dakọtara na iPad Retina ngosi, iPad Obere, iPad 2, iPad Air, The New iPad na iPad 1 mgbe ha na-agba ọsọ iOS 5, iOS 6, iOS 7, iOS 8 na iOS 9.
Nzọụkwụ 2. mmekọrịta iPad ọhụrụ kọmputa
Ebe a, ga-amasị m na-egosi gị ụzọ ka mmekọrịta iPad faịlụ ka iTunes na ọhụrụ na kọmputa, na nkwado ndabere na mpaghara iPad faịlụ na ọhụrụ na kọmputa.
Iji mmekọrịta iPad data ọhụrụ iTunes mfe, ị nwere ike pịa "Copy iDevice ka iTunes", na akara ngosi na ala akara nke bụ isi window. Mgbe ahụ, pịa "Malite"> "Detuo na iTunes".
Ma ọ bụ, ị nwere ike pịa "Media" na "Ndetuta egwu ọkpụkpọ" ke hapụrụ kọlụm karị ka mmekọrịta data ka iTunes. Media na-agụnye music, fim, egwú videos, iTunes U, pọdkastị, audiobooks na TV na-egosi.
Ọ bụrụ na ị chọrọ nkwado ndabere na mpaghara iPad data na kọmputa, pịa ọ bụla taabụ na ekpe kọlụm. Họrọ kwekọrọ ekwekọ faịlụ wee pịa "Export ka". Na faịlụ nchọgharị window, họrọ otu ọnọdụ ịzọpụta iPad faịlụ.
Cheta na: Na priamry window, pịa "Export Music ka nchekwa" ka mmekọrịta iPad music ndị ọhụrụ na kọmputa.
Na TunesGo, ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ a nsogbu ka mmekọrịta iPad na ọhụrụ PC. Download a usoro inwe a na-agbalị ugbu a!
N'oge na-ebufe, i kwesịrị ime n'aka gị iPod jikọọ oge niile.
iPad ahịhịa nwere ike - Olee otú naghachi ehichapụ faịlụ na iPad
Olee otú Jiri iPad dị ka ihe mpụga ike mbanye
Otú nyefee Photos, Video, kọntaktsị, kalinda, iMessages na Music si iPod
Otú nyefee Video site na kọmputa na-iPad